January 2017 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Jan 31, 2017 0
Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada waxa uu kamid yahay barnaamijyada habeen waliba ka baxa Idaacadda Alfurqaan, waxaana lagu soo qaataa waraysiyo lagu falanqeynayo xaaladda dalka. Halkan ka dhagayso Dhuuxa wareysiyada 31 01 2017
guuleed	 Jan 31, 2017 0
Warka Duhur waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan Kala Deg Warka duhur 31 01 2017.
Idaacadda ku hadasha Afka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee Andalus ayaa baahisay sawirro muujinaya weerarkii maalintii Jimcaha guutada Saalax Nabhaan ay ku qaaday saldhig ciidamada Kenya ku lahaayeen duleedka deegaanka Kulbiyow ee…
Warka Subax waxa uu kamid yahay sadaxda war ee ka baxa idaacada alfurqaan waxaana saaka ku baxay qodobo kala duwan. Halkan Kala Deg Warka Subax 31 01 2017.
Madaxweynaha cunsuriga Maraykanka Donald Trump ayaa dhawaan soo saaray qaraar uu kaga mamnuucay muwaadiniinta kasoo jeeda todobo dowladood oo katirsan Caalamka Islaamka iney soo galaan dalka Maraykanka, ayaa waxaa go’aankaas aad uga hor…
guuleed	 Jan 30, 2017 0
Dhuuxa Wareysiyada Waa Barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa Caawa Lagu soo qaatay qodobo Muhiim Ah. Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 30 01 2017.
Warka Duhurnimo waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga Hoose. Halkan Kala Deg Warka Duhur 30 01 2017.
Warka Subax idaacadda alfurqaan waxaa saaka ku baxay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga Hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka Subax 30 01 2017.
Shan ruux oo lagu dilay Masaajid ku yaala Wadanka Kanada.
inta la xaqiijiyay 5 ruux ayaa ku dhintay rasaas dablay hubaysan ay ku fureen dad ku sugnaa Masaajid ku yaala magaalada Quebec ee dalka Kanada. Dadka dhintay ayaa kamid ahaa 50 ruux oo ku cibaadeysanayay Masaajidka. Booliska Kanada…
34 ruux oo indhaha loogu fiiqay Shabeelaha Dhexe.(Maqal)
Dhaqaatiir ka tirsan jimciyada samafalka Al-ixsaan Alkhayriyaha oo hoostagta xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa ku sugan Gobalka Shabeelaha Dhexe. Dhaqaatiirta ayaa indhaha ufiiqay 34 ruux oo isugu jiray rag iyo haween. Howshaan oo…